China Dongshen Brush N'ogbe Blue Resin Na -ejigide Black Badger Hair Nkịtị Ncha na -emepụta ihe na onye na -eweta ngwaahịa | Dongmei
Dongshen Brush N'ogbe Blue Resin na -ejigide ntutu Black Badger na -adịgide adịgide ahịhịa ahịhịa ụmụ nwoke na -ehicha.
Ahịhịa ịcha afụ ọnụ Dongshen bụ nke ejiri ajị ojii ojii na aka resin mee. Eji ya mee ka ajị agba dị nro tupu ịkpụ afụ ọnụ, na -enweghị mgbakasị ahụ. Enweghị ntutu isi ọ bụla, enweghị mpe mpe mpe mpe mpe mpe akwa, na -eme ka enyi gị na -adigide na -eme emume ịkpụ afụ ọnụ gị kwa ụbọchị. A pụkwara ịhazi agba na aha mmado.
Ncha ntutu isi Black Badger bụ klaasị kacha sie ike. Ha na -ejide oke mmiri wee mepụta ọmarịcha mmiri. Ọtụtụ ndị na -akpụcha mmiri na -ahọrọ brushes ntutu ojii ojii n'ihi isi ike ha. Ndị ọzọ na -ahọrọ akara nrịba dị nro, ọkachasị ndị nwere akpụkpọ anụ ahụ.
Akụrụ ọnụ ihe Ajị ajị (ajị ojii ojii).
Nke gara aga: Dongshen ahịhịa okomoko eke rụrụ rụrụ dị ọcha badger ntutu resin na -ejikwa akara ịkpụ afụ ọnụ iji mee ka ajị ihu dị nro
Osote: Dongshen kabuki ahịhịa emeputa obi ọjọọ-free eriri sịntetik ntutu aluminum aluminum ntụ ntụ ntọala bronzer ahịhịa
Dongshen etemeete ahịhịa Cleaner siri ike Ncha Mma ...
Dongshen kpochapụwo etemeete ahịhịa setịpụrụ omenala privat ...
Dongshen ọkachamara etemeete ahịhịa set vegan fi ...
etemeete ahịhịa setịpụrụ, Mee Ncha, Ntọala ịkpụ afụ ọnụ, Ngwá Ọrụ Nchacha etemeete, Ịkpụ afụ ọnụ, Nịm etemeete ahịhịa,